04/08/2018 admintriatra 0
Hita eto Madagasikara avokoa izay zavatra rehetra mahamenatra tsy misy manerana izao tontolo izao. Tranga iray amin’izany ohatra ny filatsahan’i Andry Rajoelina, mpanongam-panjakana ho kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena… Rafi-pitsarana Voasoratra ao anatin’ny « accord de Cotonou » …Tohiny
Fatim-behivavy miboridana ary lehilahy iray feno dian-java-maranitra no hita teny Tanjombato omaly. Voalaza fa mpifankatia izy ireto ary tsy nisy nahatsikaritra na nandre ny zava-nitranga ny mponina teny amin’ny manodidina. Efa misokatra moa ny fanadihadiana …Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : “Aty ny lakile, ary tsy haverina”
Mitohy hatrany ny fitetezam-paritry ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany, ka tao amin’ny distrikan’i Vangaindrano indray no notsidihany omaly. Nandritra ny tafa nifanaovany tamin’ny vahoaka tany an-toerana no nanambarany fa any aminy …Tohiny
Madarail : Mpandeha 2 no maty
Nitrangana lozam-pifamoivoizana an-dalamby teny amin’ny lalambin’Andekaleka omaly tamin’ny telo ora tolakandro. Fiaran-dalamby an’ny orinasa MADARAIL antsoina hoe DIASOA io niharan-doza io. Hiditra ny tetezan’ny Jirama eo Andekaleka iny no nilatsaka tampoka ny “wagon” ka ity …Tohiny